Tetikasa Fihariana: 19 miliara Ar ny famatsiambola efa nivoaka | NewsMada
Tetikasa Fihariana: 19 miliara Ar ny famatsiambola efa nivoaka
Nisokatra ny volana mey 2019 teo, ny tetikasa Fihariana fandaharanasa noforonin’ny filoha Rajoelina. Maherin’ny 200 miliara Ar ny famatsiambola hampiasaina iaraha-miombon’antoka amin’ny banky BNI sy ny BOA.
Nilaza ny sekretera mpanatanteraka ny Fihariana, Rtoa Zafindravaka Valérie fa nahatratra 34.900 ny tetikasa azo avy any amin’ny farira 22 eto Madagasikara, ka noraisina natao sivana farany ny 16.800. Taorian’izay, niisa 2.722 ny tetikasa voaray, efa novatsina vola mahatratra 19 miliara Ar. Mitentina 200 tapitrisa Ar ny tetibola farany ambony ary 4 hetsy Ar ny farany ambany. Lehilahy ny 62%-n’ny tompon’ny tetikasa ary vehivavy ny 38%.
Hamorona asa 250.000
Anisan’ny ifantohan’ny fihariana ny fambolena voankazo sy legioma (5%-n’ny tetikasa novatsina vola), ny sakafom-biby (6%) toy ny fambolena katsaka amin’ny velaran-tany 7.940 ha. Eo koa ny famokarana ronono (5%), ny fiompiana tantely, akoho, sns.
Nahazo fiofanana manokana avy amin’ny Vondrona iraisam-pirenena misahana ny asa (OIT) ireo teknisian’ny Fihariana, ka hampiofana ny misitraka ny tetikasa indray izy ireo avy eo.
Natsangana any Antsirabe ny ivontoeram-piofanana Ivoary, ka miisa 30 ny tanora efa miofana any ankehitriny.
Nilaza ihany Rtoa Zafindravaka Valérie fa tanjon’ny Fihariana ny hamorona asa maherin’ny 250.000 ato anatin’ny dimy taona ho avy.